Hal -abuurka Faallooyinka Sep-28-2020
Akhristayaasha qaaliga ah, waxaan ka hadalnay qaybta naqshadeynta si loo xakameeyo caaryada ka -hor -dhaca ee maqaalkii ugu dambeeyay (Sida loo xakameeyo qalloocinta qaybta haanta hawada & biyaha? wax badan oo wax ka beddelid ah ayaa lagu hagaajiyaa cabirka iyadoo la raacayo natiijada tijaabada caaryada dhabta ah. Sidaad ogtahay, qayb kala duwan waxay leedahay joomatari kala duwan, sidaa darteed heerka wax -ka -beddelka ee kala duwan waa inuu u dhigmaa xalal kala duwan. ok, fadlan i soo raac si aan u ogaado xalka aan ku dhaqmi lahayn.
Hadalka guud, sida caadiga ah waxaan u baahanahay 4 jeer tijaabada caaryada si aan u diyaarino caaryada diyaarka u ah iibinta, iyo tijaabo kasta waxay leedahay doorkeeda inay gacan ka geysato dhammaystirka caaryada.
Tijaabinta T0 waa ficilka kooxdayada gudaha si loo hubiyo shaqada caaryada, oo loo xaqiijiyo natiijada ka-beddelidda hore ee aan u qaabaynay ama ku samaysnay caaryada inay sax yihiin iyo in kale.
Helitaanka xogta qayb ka mid ah naaquska dhabta ah (Dusha dhammaadka saldhigga, tuubada tuubada, godadka ku habboon, xidhitaanka shirarka…)
Isku day inaad hesho dhammaan arrimaha caaryada, si kasta oo ay tahayba ha ahaato ama ha qarsoon ， tusaale ahaan: furitaanka caaryada/xidhitaanka, ficil ka-qaadista caaryada, xaaladda dheelitirnaanta walxaha, qayb ka mid ah xaaladda wax-ka-beddelidda, toosh iyo qaylo-gaaban iwm.
Si aad shaybaarrada ugu joogto heerkulka caadiga ah 24h oo leh xaalad lacag la'aan ah, ka dibna cabbir cabbirkooda (cabbiraadda cabbirka kaliya ee wax ka beddelka gudaha), gaar ahaan si aad u hubiso aagga cagta, sida toosnaanta, fidnaanta, dhererka cagaha iyo dhumucda. Sababtoo ah aagga cagtu had iyo jeer waa xog -ururinta cabbirka. Marka la helo warbixinta cabbirka T0, ka dibna wax ka beddel caaryada iyadoo la raacayo alxanka.
Ku saabsan wax ka beddelka cabbirka ka dib T0, kaliya ka taxaddar deggenaanshaha, toosnaanta iyo isku dheelitirnaanta.
Tijaabinta T1, macmiilka caadiga ah ayaa nagu soo biiri doona tijaabinta caaryada.waana inaan xaqiijinaa hadafyada ka hooseeya T1.
Shaqaynta caaryada iyo dhaqdhaqaaqu waa inay ahaataa OK, xaaladda duritaankana waa in lagu socodsiiyaa xaalad deggan.
Cabbirrada muunadaha waa inay ku dhowaad ku habboon yihiin aagga lugta toosnaanteeda, fidnaanteeda iyo kala -soociddeeda.
24 saacadood ka dib, cabbira shaybaarka (warbixinnada cabbir buuxa ayaa loo diri doonaa macmiilka) iyo iyadoo la raacayo natiijooyinka si loogu dhaqmo wax ka beddelka caaryada.
Beddelidda birta jilicsan ee gundhigyada muhiimka ah ee birta adag ee loo baahan yahay. Dhanka kale hubi aaladda iyo qaybaha heerarka si aad u diyaariso liiska hubinta.
Sameynta xoogaa isku -hagaajin ah oo ku saabsan toosnaanta, isku -dheellitirka iyo isku -dheelitirnaanta.
Wanaajinta dhammaan dulqaadka booska.
Hadafyada tijaabinta T2 waa:
95% cabbirka booska tuubooyinka, jajabyada iyo googoysyada dulqaadka. Si aad u cabbirto shaybaarka oo aad hubiso haddii ay jiraan cabbirrada NG oo sii jiraya.
100% toosnaanta, isku -dheellitirka iyo isku -dheelitirnaanta ayaa ku jirta dulqaadka.
Dhammaan isku -dheelitir la'aanta u dhexeysa gelinta waxay ku jirtaa 0.1mm.
Tijaabooyinka T2 waa in loo soo gudbiyaa macaamilka si loogu shaqeeyo imtixaanka iyo isu -imaatinka, la xiriirka macmiilka haddii jawaab -celin laga helo imtixaannada. Haddii aan la beddelin injineernimada waxaan u beddeli doonaa caaryada jadwalka.
Hagaajinta dhammaan dhinacyada.
Tijaabinta T3 caaryada waa in si buuxda loo dhammaystiraa cabbirka iyo arrimaha muunadda.
Tijaabada oggolaanshaha aaladda (TA ama T4) waa in si joogto ah loo socodsiiyaa 2-4 saacadood si loo xaqiijiyo shaqada caaryada iyo tayada muunadda. Ka dib marka tijaabada la dhammeeyo ugu dambeyntii hubi caaryada kahor shixnadda.
Kor waxaa ku qoran soo koobidda geeddi-socodka wax-ka-beddelidda caaryada ka-horraynta. macluumaad faahfaahsan fadlan nagala soo xiriir harry@enuomold.com
Waad ku mahadsan tahay waqtigaaga!
Waqtiga dhejinta: Sep-28-2020